गन्तब्य नेपाल न्युज :: पर्यटन
–माधव भट्टराई – भक्त हमाल –यज्ञ ढकाल – राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा –लिला बहादुर लामा तामाङ – रोहन गुरुङ – सुवर्ण श्रेष्ठ – सिताराम सापकोटा – भिष्म राज शिवाकोटी – नयन पौडेल – नरेश गेलाल – यम खड्का – मदन भण्डारी – साजन शाक्य –बासु लम्साल – भरत तिमल्सीना –यम दवारी – बुद्धि रेग्मी – सोभा गुरुङ – अर्जुन रिजाल – केशव नेपाल – गायत्री प्रसाद खतिवडा – बासु नेपाल – पदम योङहाङ – राजन दाहाल – बासु अधिकारी – बिनोद सापकोटा – राम खड्का – जिस्वा तुलाधर – माया शेर्पा –कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ –आङ पेम्बा शेर्पा – खोपनिधि लोहनी – ध्रुब सिम्खडा – रन बहादुर खड्का – ठाकुर पोखरेल – रमेश पुरी – अमर थापा – माधव तिमल्सीना – ईश्वर गरुङ – भरत नेपाल – राजेन्द्र भण्डारी – अन्जन शाःख – अर्जुन बहादुर श्रेष्ठ – शम्भु श्रेष्ठ – अनिल श्रेष्ठ – जिवन कुनवार – कृष्ण रिजाल –मनिषा लिम्बु –रस्मिला डंगोल – अञ्जना तिम्राकार – प्रचन्ड शाक्य – कम्पोस दाहाल – केशव शर्मा – मोहन योन्जन – दलवीर भण्डारी – वाङ्छु शेर्पा – सुजन नेपाल – पुष्प राज भट्टराई – जिवन थापा मगर – सैलेन्द्र गुरागाई
२०८ मुलुकका हिरोले एकसाथ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्दै
काठमाडौं, ५ कात्तिक । प्रिन्स प्रोडक्सनले एकसाथ २०८ मुलुकका प्रतिनिधी व्यक्तित्वहरुलाई सगरमाथा चढाउने भएको छ। ‘२०८ हिरोज जर्नी टु एभरेस्ट’ परियोजना अन्तर्गत विश्वभरका जनताले आफूलाई मन परेको हिरोलाई भोट गरेर सगरमाथा चढ्न पठाउने छन् ।
पहिलो पटक सुरु गरिएको यो परियोजनाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको परियोजनाका कन्सेप्ट डेभलपर शान्त शर्माले बताए । विश्वभरिका नागरिकले पब्लिक भोटिङमार्फत हिरो चुन्ने छन् । चुनिएका रियल लाइफ हिरोहरूको सगरमाथा यात्रालाई समेटिनेछ । हिरो छनोटका लागि पब्लिक भोटिङ अनलाइन हुने छ, जसका लागि भोटिङ वेबसाइट यसअघि नै लन्च गरिसकिएको छ।
यस कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित एक कार्यक्रममा तीन मिनेटको भिडियो समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एव्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजता कोइरालाले २०८ देशका नम्बर वन पब्लिक फिगर एकैसाथ सगरमाथा आरोहण गर्न आउनु नेपालकै लागि गर्वको विषय भएको बताइन । यसले विश्वभर नेपालबारे सकारात्मक सन्देश दिने बताइन् ।
यस्तै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रचारमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
न्यौपानेद्धारा रसुवा नौकुण्ड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
डक्टरेट बने वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी थपलिया
पर्यटकलाई सर्तसहित अनअराइभल भिसा खुला
एनटिभिएमा सन्तोष न्यौपाने बिजयी भएसँगै कार्यसमितिद्धारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटिभिए) को साधारण सभा एवम् निर्वाचन आगामी भदौ ११ गते हुने भएको छ। संघको कार्यसमिति बैठकले सो मितिमा १७ औं र १८ औं साधारण सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त साधारण सभाले संघको आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गर्नेछ । संघले कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै साधारण सभा एवम् निर्वाचन आयोजना गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौं, ८ साउन । कोरोना संक्रमणले गर्दा करिब २ वर्षयता नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन खस्किएको छ । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरपछि केही तंग्रिदै गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनः दोस्रो लहरको संक्रमणले नराम्ररी थलिएको छ। व्यवसाय प्रभावित हुँदा साना एवम् मझौला केही व्यवसायी यो क्षेत्रबाटै पलायन भइसकेका छन् भने ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको होटल संघ नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए ।
संचालनमा रहेका होटल व्यवसायहरु पनि आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर छन् । न्यून क्षमतामा व्यवसाय संचालन गर्दा समेत कोरोनाले १५ देखि २० प्रतिशत ऋणको भर थपिएको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर कम भएकाले व्यवसाय बचाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिने तयारीमा व्यवसायी छन् । तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने अवस्था नरहेकाले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटकको विकल्प नभएको निश्कर्ष सहित व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटक लक्षित प्याकेज ल्याउने बताएका छन् ।
एक अध्ययन अनुसार कोरोनाका कारण पर्यटन उद्योगमा आबद्ध ६५ प्रतिशत मजदूर बेरोजगार भएका छन् भने संचालनमा रहेका ८० प्रतिशत प्रतिष्ठानले संचालन खर्च समेत उठाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं, २ वैशाख । हेलि एभरेष्टका तीन जना डाइरेक्टरले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। मार्केटिङ डाइरेक्टर टाशीलाक्पा शेर्पा, अप्रेशन डाइरेक्टर एवं पाइलट कृष्णप्रसाद गौचन (सोवित) र प्रमोसन डाइरेक्टर फूर्वाछिरिङ शेर्पाले मे ११ तारिखका दिन बिहान ७ बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका हुन्।
हेलि एभरेष्टका प्रबन्ध निर्देशक फुरगेल्जे शेर्पा (फूर्वा) ले तीन जना डाइरेक्टरले एकसाथ सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा आरोहणले हेलि परिवार धेरै खुसी भएको भन्दै उनीहरुको उज्वल भविष्यको कामना समेत गरेका छन्।
आरोहणमा सहभागीमध्येका टासीलाक्पाका तीन दाजुभाइले विश्वभर रहेका आठ हजारभन्दा माथिका सबै हिमालहरु एकसाथ आरोहण गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा नाम लेखाइसकेका छन्। यस्तै, सोवित पहिलो पाइलट आरोही बनेका छन्। फूर्वाछिरिङ युवा पर्यटन व्यवसायी हुन्।
अन्नपूर्णमा हराएका रसियन पर्वतारोही सम्पर्कमा आए
प्रिन्स प्रोडक्सनले २०८ मुलुकका हिरोलाई एकसाथ सगरमाथा चढाउने
भिटोफमा राजकुमार निर्बिरोध निर्वाचित, आधिकारिक घोषणा २० गते हुने
भिटोफमा थापाको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति बन्दै
काठमाडौं, १६ चैत । गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालमा राजकुमार थापाको नेतृत्वमा सहमतिय आधारमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुने भएको छ। विभिन्न पार्टी सम्वद्ध पर्यटन व्यवसायीहरुको छलफलबाट थापाको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि तयार भएका हुन ।
केही दिन अघि देखि नेकपा एमाले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्वद्ध पर्यटन व्यवसायीहरुले जिबन थापामगर, माधव कुमार नेपाल सम्वद्ध व्यवसायीहरुले शिब लामिछाने, कांग्रेस सम्वद्ध व्यवसायीहरुले रामशरण थपलिया र जनता समाजवादी पार्टी सम्बद्ध व्यवसायीहरुले डिबी लिम्बुको संयोजकत्वमा भिटोफ निर्वाचनलाई लक्षित गरी सम्वाद समिति गठन गरी छलफल तीब्र बनाएका थिए ।
थापाको नेतृत्वमा गठित नयाँ कार्यसमितिको महासचिवबारे निर्णय भइनसकेपनि अन्य पदको टूंगो लागिसकेको स्रोतले जनाएको छ। एबान एक्सकर्सनका संचालन थापा भिटोफको पूर्व महासचिव हुन ।
हर्षपुर–डाँडागाउँ सामुदायिक होम स्टे तनहुँको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न
प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ‘भ्यूटावर रिर्सोट’ सबैको रोजाईमा
एमाले सम्बद्ध व्यवसायीले शिब लामिछानेको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटि बनाए
काठमाडौं, ९ चैत । नेकपा एमाले सम्बद्ध पर्यटन व्यवसायीहरुले गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालको निर्वाचनको सन्दर्भमा छ्लफलका लागि भिटोफका पुर्वअध्यक्ष शिब लामिछानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता कमिटि गठन गरेको छ । संगठन नेपाल उधोग तथा व्यवसायी महासंघका कार्यबाहक महासचिब भागिरथ सापकोटा , नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष मदन आचार्य,पर्यटन व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष कुमार थापा तथा नेकपा एमाले पर्यटन ईलाका कमिटिका अध्यक्ष धुर्ब सिंखडा लगायत पर्यटनसंग सम्बन्धित एमाले सम्बद्ध व्यवसायीहरुको छ्लफलले उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरुमा दामोदर ढकाल, बद्रि तिमल्सिनी, केशब धिताल र प्रदिप पण्डित रहेका छ्न । समितिले यहि चैत २० गते हुने भिटोफ नेपालको २४ औँ बार्षिक साधारणसभा सहितको निर्वाचनबाट नेतृत्व चयनका लागि विभिन्न पार्टी समर्थित व्यवसायीक संगठनहरुसंग छ्लफल गर्नेछ ।
थपलियाको संयोजकत्वमा निटले बनायो सम्वाद समिति
काठमाडौं, ९ चैत । गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालको नेतृत्व चयनका लागि नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट) ले केन्द्रिय सह-अध्यक्ष रामशरण थपलियाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता तथा सम्वाद समिति गठन गरेको छ । निटका केन्द्रिय अध्यक्ष दीपक महतको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिवालय बैठकले समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरुमा बलराम न्यौपाने (दुर्गानाथ ), राजेन्द्र सुवेदी, रमेश लम्साल र बिमल नहर्की रहेका छ्न । भिटोफ नेपालको २४ औँ बार्षिक साधारणसभा सहितको निर्वाचन यही चैत्र २० गते हुँदैछ । काङ्ग्रेस समर्थित व्यावसायिकका तर्फबाट अध्यक्षको आकांक्षीका रुपमा पूर्व सह-कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर सुबेदी(कृष) र वर्तमान महासचिव जस्फा पाण्डेले दावेदारी प्रस्तुत गरेका छ्न । नेतृत्वका लागि समितिले यी दुइमध्यबाट एकको नाम छनोट गरि निट कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्ने छ । योसंगै समितिले नेतृत्व चयनका लागि अन्य विभिन्न पार्टी समर्थित व्यवसायीक संगठन संग पनि छ्लफल गर्नेछ ।
गन्तव्य न्यूज प्रभाव : भिटोफ नविकरणका लागि हारगुहार सुरु
ठमेलको छायाँ सेन्टरमा खुलेको अर्चिट टूर्स एण्ड ट्राभल्सको उद्घाटन आज
संस्थाको बैधानिकता बिनै भिटोफले निर्वाचनको हवाला दिएको खुलासा
नेपाल पर्यटन बोर्डद्धारा प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापनाको तयारी
नयाँ बर्षलाई लक्षित गरी ‘होटल प्लेजर होम’द्धारा आकर्षक छुट प्याकेज सार्बजनिक
भूमेचुली डाँडाको भ्यूटावरले जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा
पर्यटन बोर्डमा तालाबन्दी गर्न पुगेका पर्यटन मजदुरमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप, दर्जनौ पक्राउ
ठमेलमा रात्रीकालिन व्यावसायीको प्रदर्शन :‘सरकार भन्छ, ताला ला, घरबेटी भन्छन– छाडेर जा’
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई भन्छन,–‘व्यावसायिक हकहितको जर्गेना गर्नेछु ।’
युवा पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी छेटुप तामाङ किवानीस क्लबको अध्यक्षमा निर्वाचित
पोखरा जादैहुनुहुन्छ,–‘होटल ह्वाईट हिमाल तपाईको पहिलो रोजाई बन्न सक्छ’
उद्योग महासंघमा थपलियाको उमेद्धवारी, ‘पर्यटन क्षेत्र सुधार मुख्य एजेण्डा’
कोरोनाका कारण हानका निवर्तमान अध्यक्ष शाक्यको निधन
काठमाडौं, ५ मंसिर । होटल संघ नेपाल (हान) का निवर्तमान अध्यक्ष अमरमान शाक्यको निधन भएको छ। ७० वर्षीय शाक्यको उपचारका क्रममा आज बिहान ओम अस्पतालमा निधन भएको हो ।
शाक्य अमर होटेलका संचालक हुन् ।
दशैंपछि कोरोना संक्रमण देखिएको उनमा निमोनियाको समस्या थियो ।
५०० जना पर्यटन व्यवसायीलाई भर्चुअल तालिम दिंदै पर्यटन बोर्ड
काठमाडौं, ३ मंसिर । नेपाल पर्यटन बोर्डले पाँच सयभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीलाई डिजिटल माध्यमबाट तालिम दिने भएको छ। कोरोनाभाइरस महामारीको जोखिमका कारण डिजिटल माध्यमबाटै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि तालिम दिन लागिएको बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बताए।
१० मंसीरदेखि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग तथा यसको प्रभावकारितासहितका विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट तालिम दिन लागिएको हो। तालिमपछि पर्यटन व्यवसायीले डिजिटल माध्यमको अधिकतम उपयोग गरेर आआफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सक्ने अपेक्षा बोर्डको छ।
बोर्ड हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आए पनि यो वर्ष भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि भर्चुअल माध्यमबाटै उपस्थिति जनाइरहेको छ। बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्ने पर्यटन प्रवर्द्धन पनि डिजिटल माध्यमबाटै गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमितामा राखेको छ। बोर्डले वेबसाइटबाटै पर्यटन प्रवर्द्धन र मार्केटिङ गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका सहप्रवक्ता लामिछानेका अनुसार, बोर्डको वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पोर्टलमा रुपान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ।
बोर्डले यसअघि कोभिड १९ पछिको पर्यटन क्षेत्र खुला गर्दा अपनाउनुपर्ने आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डबारे करीब ६ सय जनालाई भर्चुअल माध्यमबाटै तालिम दिएको थियो।
कतारका राजकुमारले चढे अमादब्लम हिमाल
काठमाडौं, २६ कात्तिक । कतारका राजकुमारले अमादब्लम हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। राजकुमार शेख मोहम्मद विन अब्दुल्लाहले ६ हजार आठ सय १२ मिटर अग्लो हिमालको आज सफल आरोहण गरेका हुन्।
राजकुमारको आरोहण टोलीमा ६ जना विदेशबाट आएका आरोही थिए। हिमालयन गाइड ईश्वरी पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार राजकुमारसहित उनको टोलीले बुधबार बिहान ११ ः २० मा अमादब्लम हिमालको सफल आरोहण गरेका हुन्।
'संस्था नवीकरणको रकम अध्यक्षले हिनामिना गरेको' आरोपप्रति टानको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौं, २५ कार्तिक । 'टानका अध्यक्षले संस्था नवीकरणको रकम हिनामिना गरेको' भन्ने आशयले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हल्लाप्रति टानले आपत्ति जनाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले पूर्वाग्रहले प्रेरित भई आफूमाथि लगाइएका 'कपोकल्पीत आरोप'प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा टान अध्यक्ष सुवेदीले संस्था नवीकरणको ५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप सहित हल्ला फैलिएको थियो । आफूलाई बदनाम गर्ने हेतुले फैलाइएको सुनियोजित हल्ला पूर्ण रूपमा निराधार रहेको अध्यक्ष सुवेदीले स्पष्ट पारेका छन् ।
'यस संघमा मेरो यात्रा लामो रहदै आएको छ र भविश्यमा पनि संघको सदस्यको हैसियतले सङ्घको भलो चिताएर निष्ठापूर्वक कार्य गर्ने नै छु,' विज्ञप्तिमा अध्यक्ष सुवेदीले भनेका छन्, 'बिगतमा कार्यसमितिको सदस्य, कोषाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदिय जिम्बेवारी पुरा गर्दै वर्तमान अवस्थामा अध्यक्ष पदसम्म आईपुदा मैले सधै संस्थाको हित, पर्यटन व्यवसायीहरुको मर्म र भावना अनुरुप सत्य र निष्ठापूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दै आइरहेको छु ।' हल्ला फैलिएकै दिन सङ्घको बिधानले अध्यक्षलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले बिधिसम्मत तरिका बाट केहि सदस्यहरुको मनोनयन गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । 'अध्यक्षको अधिकार क्षेत्रलाई आफैले प्रयोग गर्न नपाएको रिसले मैले मनोनयन गरेका सदस्यहरु प्रति असहमती जनाउदै केही असन्तुस्ट पक्षले मेरो चरीत्र हत्या गर्ने गरी म माथि लगाईएको त्यस्ता आरोप कपोकल्पीत र भ्रामक भएको र कुनै सत्यता नभएको तर्फ सम्बन्धित सन्चार माध्यमहरु समेतको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष सुवेदीको विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ- 'संघलाई मैले भुक्तान गर्न बाँकी कुनै बक्यौता नभएको र यस विषयमा जान्न र बुझ चहानेहरुकालागि टानको ढोका सधै खुल्ला रहेको बारे पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अतः यस भ्रमक समाचारको पछि नलागीदिन पनि म सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।'
टान कार्यसमितिले एक वर्षपछि पूर्णता पायो
काठमाडौं, २४ कात्तिक । ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान)को कार्य समिति सदस्यमा ६ जनालाई मनोनीत गरिएको छ। आज बसेको टान कार्यसमिति बैठकले पर्यटन व्यवसायीहरु बल बहादुर सामरी, जितेन्द्र झाकरी, सुस्मा बस्नेत, हरि कडरिया, कुल प्रसाद सुबेदी र गोबिन्द प्रसाद पन्तलाई कार्यसमितिमा मनोनीत गरेको हो ।
टानको ४१ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट खुमबहादुर सुवेदीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको एक वर्षपछि उनीहरुलाई मनोनीत गरिएको हो । यो सँगै टान कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ। निर्वाचिन पदाधिकारीले ६ जना सदस्यहरु मनोनीत गर्न सक्ने बैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
काठमाडौं, १७ कात्तिक । बहराइनका राजकुमार फर्किएलगत्तै नेपाल आएका कतारका राजकुमार शेख मोहमद विन अब्दुल्ला आमादब्लम हिमाल आरोहण गर्न आधार शिविर पुगेका छन् । राजकुमार शेख मोहम्मदसहित १४ सदस्यीय टोली आइतबार आमादब्लम हिमालको आधार शिविर पुगेको हो ।
विश्वको सुन्दर तर आरोहणका लागि कठिन मानिने आमादब्लम हिमाल आरोहणका लागि कतारका राजकुमारसहित अमेरिकन र क्यानेडियनको टोली आधार शिविर पुगेको आरोहण व्यस्थापन गरेको हिमालयन गाइड्स नेपालका प्रवन्ध निर्देशक ईश्वरी पौडेलले बताए । कतारको राजकुमारसहितको टोली हिमाल आरोहणका लागि दसैंको दिन काठमाडौंबाट लुक्ला प्रस्थान गरेको थियो ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न २४ दिनको साइकल यात्रा
काठमाडौं, १७ कात्तिक । विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको नेतृत्वमा महाकालीदेखि मेचीसम्म साइकल यात्रा सुरु गरिएको छ । आज एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको हो ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि साइकल यात्रा थालिएको हो। यो २४ दिनको हुनेछ। यो यात्रालाई ‘नेपाल साइकल फेस्टिभल २०२०’ नाम दिइएको छ। टोली कात्तिक १८ मा महेन्द्रनगर पुग्नेछ। त्यहाँबाट सुरू हुने साइकल यात्रा मंसीर ९ गते काँकडभिट्टा पुगेर समापन गरिनेछ।
यात्रामा १४ जनाको सहभागिता रहेको छ।
मिङ्मा शेर्पा : एक सफल समाजसेवी किर्तिमानी आरोही
पाटा नेपाल च्याप्टरको कोषाध्यक्ष र सचिब पदमा सुमन पाण्डे निर्वाचित
आन्तरीक पर्यटकहरुको लागि लोभलाग्दो गन्तव्य : नुवाकोट तारकेश्वरको ढिकीजाँतो चुली
‘जो लकडाउनकै बिच पनि पर्यटन क्षेत्र सुधारमा लागि परिरहे.....’
पर्वतिय पर्यटन : व्यावसायी भन्छन, सरकारले आउने पर्यटकलाई पनि हतोत्साहित गर्यो
गौतमबुद्ध विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल एयरलाइन्सलाई दिने तयारी
मन्त्रीपरीषद् बैठक बस्दै
लकडाउनपछि पर्यटन क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्छ : योगेश भट्टराई, मन्त्री
पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा ७ सय १३ आयोजनाको आवेदन
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हप्तामा दुईदिन विदा दिनेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौं, ८ असोज । कोरोनाका कारण सुस्त भएको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव तयार पार्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको छ।
मन्त्रालयले दुई दिने विदाको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वको ६ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको सदस्यमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मी रहेका छन्। कार्यदलका अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने योजना पनि मन्त्रालयले तयार पार्दैछ। यस्तो योजना बनाउन पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ।
क्षेत्राधिकार मिचेर कार्य नगर्न हवाई कम्पनीहरुलाई टान र नाट्टाको आग्रह
काठमाडौं, ७ असोज । पछिल्लो समय हवाई कम्पनीहरुले ट्रेकिङ र ट्राभल कम्पनीले गर्ने प्रकृतिको कार्य गरेको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) ले विरोध जनाएको छ। ट्रेकिङ र ट्राभल कम्पनीको व्यवसाय माथि हस्तक्षेप गर्ने गरि केही हवाई कम्पनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्याकेज सार्वजनीक गरेकाले त्यस्तो कार्य नगर्न–नगराउन आग्रह गरेको छ ।
सबैले आ–आफ्नो उद्धेश्य अनुरुप कार्य गर्ने र कसैले पनि कसैको व्यवसाय माथि हस्तक्षेप गरेर काम नगर्न टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी र नाट्टाका अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईले आज संयुक्तरुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर स्वच्छ व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न पनि उनीहरुले हवाई कम्पनीहरुलाई भनेका छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण गएको चैतदेखि बन्द आन्तरिक हवाई सेवा गत सोमबारदेखि सुचारु भएको छ।
शरद ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न २ टोलीले अनुमति लिए
काठमाडौं, ७ असोज । शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि दुई वटा टोलीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार मंगलबारसम्म ६ जना नेपालीको एक टोलीले वरुत्से हिमाल आरोहण गर्न अनुमति लिएका छन् ।
यता बहराइनका १५ र बेलायतका ३ जनाले दुई टोली बनाएर मनास्लु हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन् । यी दुई आरोहण अनुमतिबाट कुल १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित आरोहण सरकारले यो सिजनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि दुई टोलीबाट कुल १६ हजार २ सय अमेरिकी डलर संकलन भएको छ । बहराइनको टोलीमा त्यहाँका राजपरिवारका एक सदस्यसमेत सहभागी छन् ।
नाटोजद्वारा गभर्नर लम्साललाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन
काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज) ले किवानिज इन्टरनेसनल क्लबको नेपाल डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चुनिएका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी मोहन लम्साललाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । लम्सालको सम्मानमा आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी नाटोजले बधाई दिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महत, उद्योग व्यवसायी कमिटिका अध्यक्ष कमल सापकोटा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामशरण थपलिया, रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपाने लगायतले लम्सालको प्रशंसा गर्दै बधाईसँगै सफल कार्यकालको शुभकामना दिए ।
नाटोजका अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलले लम्साललाई समाजसेवाका हिरोु भन्दै उनको कार्यकालमा किवानिज नेपाल डिस्ट्रिकले थप गतिशीलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मनित व्यक्तित्व नवनिर्वाचित गभर्नर लम्सालले बधाई दिने र सुभेच्छा राख्ने सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्दै किवानिज इन्टरनेसनल मार्फत नेपाली समाजको सेवामा आफू सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
किवानिज इन्टरनेसनल विश्वकै पहिलो ग्लोबल भोलन्टरिङ अर्गनाइजेसन हो । १ सय ५ वर्षअघि अमेरिकाको मिसिगनबाट स्वयंसेवा सुरु गरेको किवानिजले हाल ८७ देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । संसारभर किवानिजका ६ लाखभन्दा बढी स्ययंसेवी छन् ।
किवानिज इन्टरनेसनलले विश्वभरका आफूसँग आबद्ध क्लबहरुलाई ५० डिस्ट्रिक्टमा विभाजन गरेको छ । नेपाल के–६९ डिस्ट्रिक्टमा पर्छ । लम्साल यसै डिस्ट्रिक्टका गभर्नर भएका हुन् । विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्ने किवानिज इन्टरनेसनलले सरदर वर्षमा १ लाख ५० हजारजति सेवामूलक परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
११ चैतपछि पहिलोपटक आजदेखि खुल्यो आन्तरिक उडान
काठमाडौं, ५ असोज । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि झण्डै ६ महिना बन्द भएको आन्तरिक हवाई सेवा आजबाट सुरू भएको छ । आज बिहान ७ बजे काठमाडौंबाट भोजपुरका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ७ महिनापछिको पहिलो आन्तरिक उडान बन्न सफल भएको छ ।
सरकारले आन्तरिक व्यवसायिक उडानलाई अनुमति दिएसँगै आजबाट आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएको हो । २५ प्रतिशत हवाई उडान भएको छ । सामाजिक दुरी कायम गरी पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर हवाई यात्रा सेवा भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा दैनिक ४३ वटा उडानलाई अनुमति दिइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । आजबाट सुगममा बुद्ध एयरले १६, यतीले १०, श्रीले ६ तथा सिम्रिक र सौर्यले १–१ उडानको अनुमति पाएका छन् ।
काठमाडौं, ३१ भदौ । बहराइनका राजकुमारसहितको टोली नेपालीका दुई हिमाल आरोहणको सिलसिलामा काठमाडौं अवतरण गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बिहान करिव ११ बजे उनीहरु चढेको जहाज काठमाडौं आएको हो ।
उनीहरुलाई शेख इशा एयरवेजबाट विशेष विमानले काठमाडौं विमानस्थलमा ल्याएको हो । टोलीमा बहराइनको डिफेन्स फोर्समा कार्यरत १५ जना बहराइनी तथा ३ जना बेलायती नागरिक रहेका छन् ।
दुई महिना नेपाल बस्ने यो टोलीले लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्नेछ ।
काठमाडौं, २५ भदौ । नेपाल एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानका लागि ५ जहाज खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । ३ वर्षअघि नै बनाइएको व्यापारिक योजना थन्काएर नेपाल एयरलाइन्सले फेरि आन्तरिक जहाज खरिदको योजना बनाइरहेको छ।
एयरलाइन्सको इन्जिनियरिङ र कमर्सियल विभागले जहाज खरिदको योजना बनाइरहेका छन्। योजना निर्माण तथा छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार तत्कालका लागि ५ वटा जहाज किन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
ट्रंक रुटमा उडान गर्नका लागि कम्तिमा २ वटा ठूला जहाज चाहिन्छ र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्नका लागि ३ जहाज चाहिन्छन्। नेपाल एयरलाइन्सले चीनबाट ल्याएका जहाज नउडाउने निर्णय गरेपछि अहिले आन्तरिक उडानका लागि जम्मा ३ जहाजमात्र बाँकी छन्। ती पनि पुराना भएको भन्दै व्यावसायिक रुपमा उडान योग्य नभएको एयरलाइन्सका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
जहाज खरिद गर्नुपर्ने प्राविधिक राय भएपनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने तत्काल दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने जहाज खरिद गर्ने र दोस्रो चरणमा ट्रंक रुटमा उडान गर्ने जहाज खरिद गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ।
५ महिनापछि सुरु भयो व्यवसायी हवाई उडान
काठमाडौं, १७ भदौ । गत चैत ११ गतेदेखि बन्द भएको व्यावसायिक हवाई उडान औपचारिक रुपमा बुधबारबाट सुरु भएको छ।
नियमित उडान बन्द भएको लामो समयपछि मंगलबारबाट उडान सुरु भएको घोषणा भए पनि नियमित उडान भने बुधबारबाट सुरु भएको हो । व्यावसायिक उडान बन्द भए पनि यो बीचमा झन्डै ३ सय वटासम्म यात्रु चार्टर तथा कार्गो उडान भएको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावका सरकारले दैनिक २ वटा व्यावसायिक र १ चार्टर उडान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृती दिएको छ। सोही अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यतालिका तय गरेको छ ।
१६ भदौबाट नियमति हवाइ उडान हुने
काठमाडौं, १० भदौ । सरकारले १६ भदौबाट हुने नियमित तथा चार्टर्ड उडानको तालिका तय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यस्तो तालिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि हिजो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको हो ।
मन्त्रालयले उडानका लागि शर्तहरुसमेत तोकेको छ । पहिलो चरणमा पीसीआर परीक्षण सम्भव हुने मुलुकमा उडानका अनुमति दिइएको छ ।
विदेशबाट आउनेका लागि क्वारेन्टिन होटलको सूची
काठमाडौं, ५ भदौ । सरकारले चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रयोजनका लागि होटलको सूची र मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको होटलको सूची र मूल्य सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएका होटलमा तीन हजार ५ सय क्षमता छ।
जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गएको २ भदौमा कोभिड–१९ विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ बमोजिम विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र स्वेच्छाले होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिलाई राख्न होटल सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा पर्यटन विभागले बिहीबार क्वारेन्टाइन प्रयोजनार्थ होटलको विवरण र मूल्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठामाडौँलाई उपलब्ध गराएको थियो। तारे होटलदेखि सामान्य पर्यटकस्तरका होटलको सूची र मूल्य सार्वजनिक गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत रमा घिमिरेले बताइन्।
पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र थापाले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नसक्ने क्षमता भएका होटललाई क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गर्न सूचीकृत गरिएको बताए। अहिले तीन हजार ५ सय शय्या भएको होटललाई तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
सकभर आइसोलेटेड क्षेत्रमा भएका, कम्पाउण्ड भएका, बाहिरी व्यक्तिसँग घुलमिल हुन नसक्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्ने होटललाई सूचीकृत गरिएको उनले बताए। होटल व्यवसायी महासङ्घ, होटल एसोसियसन तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर क्वारेन्टिन होटलको सूची सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, ताहाचल, गौशाला, बत्तिसपुतली, दरबारमार्ग, सानो गौचरन, नक्साल, भक्तपुर, लाजिम्पाट, गोदावरी, कमलादी, स्वयम्भू, झम्सीखेल, बूढानीलकण्ठ, लैनचौर कमलपोखरी र बागबजार क्षेत्रमा होटललाई क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिने छ।
पर्यटन क्षेत्र खुलाउन आलटाल गरेको भन्दै आन्दोलनमा जाने व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं, ३१ साउन । सरकारलाई पर्यटन क्षेत्रसँग आवद्ध २१ वटा व्यवसायिक तथा श्रमिक संगठनले भदौं १६ गतेदेखि उडान सञ्चालन गर्दै पर्यटन क्षेत्र खुलाउन माग गरेका छन् । चार्टर उडान अनुमति दिइरहेको तर नियमित उडान सञ्चालनको समय पटकपटक सार्दै आइरहेको भन्दै ती संगठनहरुले भदौ १६ देखि पर्यटन क्षेत्र खुला नगरेमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईमार्फत सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिने संगठनहरुमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसेसिएसन अफ नेपाल, होटल एसोसिएसन नेपाल, नेपाल पर्वतरोहण संघ, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल, टूरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघलगायत छन् । यी संगठन भन्दाअघि मंगलबार आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई छुट्टै ज्ञापन बुझाउँदै भदौ १६ पछि आन्तरिक हवाइ उद्योगलाई सञ्चालनमा नल्याएमा आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ ।
यस्तै, यी संगठनहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको बनाएको मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । वायुसेवाबाहेकका अन्य तर यसैमा आश्रित संगठनहरुले यो क्षेत्र ऋणात्मक भएको जनाउँदै अब आउने पर्यटकीय सिजनमा राज्यले अबलम्बन गरेका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रोटोकलको पूर्ण पालना गराउँदै सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तीन तहका सरकारले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं, ३० साउन । देशभर बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारमा तीन वटै तहका सरकारको लागत साझेदारी अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।
यो कार्यविधिअनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा लागतको साझेदारी हुने भएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकासमा लागत साझेदारी निर्देशिका समेत स्वीकृत भइसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । यस्ता आयोजनाको लागत कम्तिमा १ करोडदेखि बढीमा ३० करोडसम्म हुनेछ ।
पर्यटन पूर्वाधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत साझेदारी गर्न सक्ने गरी कानून बनेको छ । यस्तो कार्यक्रमलाई संघले भने प्रदेशबाट सञ्चालन भएको कार्यक्रमका रुपमा बुझ्नेछ । यस्तै, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा आयोजना तथा कार्यक्रम बनाएर समेत अब मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सक्ने भएका छन् । यसरी आएको मागको अधिकतम ५० प्रतिशत बजेट भने सम्बन्धित तहले नै बेहोर्नुपर्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार एक प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम ३० करोडसम्म लागत अनुमान गरिएका आयोजनाका लागि बजेट पाउनेछ । महानगरमा १५ करोड, उपमहानगरपालिकामा १० करोड, नगरपालिकामा ७ करोड र गाउँपालिकामा एक आवमा अधिकतम ५ करोडसम्मका आयोजना संचालन गर्न सकिने भएको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेपछि मात्र दोस्रो आयोजनाको सम्झौता हुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं, २६ साउन । होटल ग्राण्डले ‘ट्राभलरर्स च्वाइस २०२०’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ। बिश्वभर रहेका पर्यटकीय गन्तब्य र होटलबारे समिक्षा प्रकाशन गर्ने साइट ट्रिप एडभाइजरले ग्राण्डलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो ।
ट्रिप एडभाईजरले लाखौं पर्यटकहरुले गरेको समिक्षा, रेटिङ, सुरक्षाजस्ता विषयलाई आधार बनाएर उत्कृष्ट होटल छनौट गर्दै आएको छ । सोही अनुरुप नोपलको ग्राण्ड होटल ‘ट्राभलरर्स च्वाइस २०२०’ विजेता बनेको हो ।
ट्रिप एडभाइजरमा हाल १४ लाखभन्दा बढी होटलहर आवद्ध रहेका छन् ।
काठमाडौं, २६ साउन । हवाई उडान र लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात भदौ १५ देखि मात्रै सञ्चालन हुने भएका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ १ देखि नै आन्तरिक र वाह्य उडान तथा लामो दुरी (अन्तर जिल्लाका) का सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आइतबार बसेको कोभिड कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर ९सिसिएमसी० को बैठकले सो मिति सार्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्ने भएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण दर र मृत्युदर समेत बढ्दै गएको अवस्थामा हवाई उडान र लामो दुरीका यातायात सञ्चालन गर्ने मिति सार्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए।
काठमाडौं, ११ साउन । बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा सहितको समूहले लाकुरी भन्ज्याङमा होटल निर्माण गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा क्रियाशिल शेर्पासहितको समूहले एक अर्ब लगानीमा माउन्ट मोनाष्ट्री होटल निर्माण गरेको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थलबाट १८ किलोमिटर र ठमेलबाट २३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको सो होटलमा ६८ वटा कोठा रहने जानकारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा ४८ वटा कोठामात्र सञ्चालनमा आउने होटलका अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए । होटलमा २ वटा स्विट कोठा, २२ वटा डिलक्स र २४ वटा स्टाण्डर कोठाहरु छन् ।
तीन महिनाअघि नै होटललाई ‘सफ्ट ओपनिङ’ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कोभिड–१९ ले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५ वर्षअघि निर्माण सुरु गरेको होटल २८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ । काठमाण्डौं उपत्यकाको दक्षिण पूर्वि भागमा २०१० मिटरको उचाईमा रहेको होटल माउन्ट मोनाष्ट्रीबाट पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका मनमोहक दृश्यहरू नियाल्न सकिने छ ।
काठमाडौं, २६ असार । कोरोना महामारीबीच मानवीय तथा स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देशभरका सामाजिक अभियन्ताहरूको सम्मान र प्रोत्साहनको उद्देश्यले गन्तव्य नेपालले यसै महिना प्रदान गर्न लागेको कोरोना डिफेन्स अवार्डका लागि योग्य व्यक्तित्वहरूको छनोट गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामशरण थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको ।छ
समितिमा नेपाल एयर लाइन्सका सन्चालक समिति सदस्य फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा,नेपाल पर्यटन परिषद्का सल्लाहकार गोपाल बाबु श्रेष्ठ , रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपाने र रिपोटर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमला रहेका छन् ।
समितिले यथाशीघ्र देशैभर क्रियाशील सामाजिक व्यक्तित्वहरूको पहिचानसँगै महामारी विरुद्ध लड्ने अभियानमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानको अध्ययन र विश्लेषण गरी अवार्डका लागि योग्य व्यक्तित्वहरूको चयन गर्ने छन् ।
नियुक्त भएको तीन महिनापछि चीन पुगे राजदूत पाण्डे
काठमाडौं, २५ असार । नियुक्ति पाएको तीन महिनापछि चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे कार्यभार सम्हाल्न चीन पुगेका छन्। कार्यभार सम्हालन राजदूत पाण्डे बिहीबार चीन पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वैशाख पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेकी थिइन्। सरकारले गत वर्ष फागुन १८ मा तत्कालीन राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर पाण्डेलाई राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो।
कोभिड–१९ का कारण चीन जानबाट रोकिएका पाण्डे बुधबार राति काठमाडौंबाट हिमालय एयरलान्यसमार्फत चीन गएका हुन्।
काठमाडौं, ११ असार । नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनका लागि गाइडलाइन्स सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारवाला निकायसँगको सहयकार्यमा समग्र पर्यटन क्षेत्र सूचनारुका लागि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रोटोकल ल्याइएको नेपाल पर्यटन बोर्डका सीइआ डा. धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए ।
‘महामारीका बीच पनि अब पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिएन भने अझ ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताउँदै सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाइएको हो,’ रेग्मीले भने ।
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पर्यटन क्षेत्र सूचारु गर्नका लागि प्रोटोकल ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै अब सेवामूलक मात्रै नभए सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए । अब राज्य, निजी क्षेत्र र जनता एकैठाउँमा भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रोटोकलमा ६ वटा बुँदा समावेश गरेको छ । जसमध्ये पहिलो नम्बर रि–स्टार्ट प्रोटोकल भनिएको छ । जसमा रि–इट्री मोडदेखि पहिलो फेजहुँदै तेस्रो फेजसम्म प्रोटोकल उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका साथै होटल, रेष्टुराँ, पर्यटन कार्यालय व्यवस्थापन, यातायात सेवाप्रदायकलाई र टुर र एड्भेञ्चर गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रोटोकल उल्लेख छ । प्रोटोकलमा सुरक्षाको क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ ।
काठमाडौं, ८ असार । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ पर्यटन ऐनमा टुरिष्ट गाईड एसोसिएशन अफ नेपाल (टूर्गान) ले सुझाव दिएको छ। टूर्गानका अध्यक्ष केदार तामाङ्ग सहित पदाधिकारीहरुले आज संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई केही बुँदाहरु संशोधन सहितको सुझाव पत्र बुझाएका हुन ।
टूर्गानले छलफलको क्रममा रहेको पर्यटन विधेयकको दफा ३१ मा रहेको नगर गाईड भन्ने शब्द खारेजी गरि पर्वतीय पथपर्दशक, सांस्कृतिक पर्यटक पथपर्दशक, पदयात्रा पथपर्दशक वा स्थानीय पथपर्दशक तथा अन्य यस्तै वर्गीकरण गर्न, पर्यटक पथपर्दशकको नवीकरण गर्दा कुनै प्रकारको पुनर्ताजगी तालीम लिएको र टूर्गानको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था सहितको ऐन ल्याउन सुझाएको छ।
त्यस्तै, बिदेशी नागरिक पथपर्दशकको रुपमा कार्य गर्न नपाउने अस्पष्टा रहेको र उक्त विषय स्पष्ट हुने गरि यस्तो कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्न र कुनै संस्थाले अनाधिकृत ब्यक्तिलाई पथपर्दशकको काम लगाएमा पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
मन्त्री भट्टराईले सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै ऐनमा समावेश गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
अध्यक्ष तामाङ्गले समयसापेक्ष ऐन निर्माण गरी पथपर्दशकको हकहित संरक्षण गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरूले सुझाव दिइएको बताए ।
ओमानबाट असार ७ गते हुने गर्ने भनिएको दोस्रो उडान तीन दिन पछि सर्‍यो
काठमाडौं, १ जेठ । ओमानबाट २१ जुन ( असार ७ गते ) हुने भनिएको दोस्रो उडानको मिति परिवर्तन गरिएको छ। सलाम एयरमार्फत हुने उक्त उडान ३ दिन अगाडि नै अर्थात् १८ जुन (असार ४) गते नै हुने ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
उक्त उडानमार्फत प्राथमिकताका आधारमा तयार पारिएको सूचीका आधारमा १८० जना नेपाल फर्कन पाउने छन् ।एकतर्फी हवाइभाडा ११५ ओमानी रियल तोकिएको छ। दोस्रो उडानका लागि छनोट भएकाहरुले आफूलाई पायक पर्ने कुनै पनि नजिकको परीक्षण केन्द्रमा वा दूतावासको जानकारीमा भए बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिड १९ को पीसीआर परीक्षण गराउन समेत दूतावासले आग्रह गरेको छ। नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त हुनेहरूले सलाम एयरको कलसेन्टर २४२७२२२२ मा फोन गरी टिकट खरिद गर्न वा सो सम्बन्धी थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिने छ।
काठमाडौं, २२ जेठ । नेपालमा रहेका बोधिसत्व विहारका मास्टर हेगुवाङ शीलाई सामुदायिक सेवा मञ्च तथा सामुदायिक प्रहरी स्वयम्भूले सम्मान गरेको छ । लकडाउनका बेला बोधिसत्व विहारले स्वयम्भू क्षेत्रमा गरेको समाजसेवाको कदरस्वरूप विहारका मुख्य सञ्चालक शीलाई सम्मान गरिएको हो ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट सरुवा भई जान लागेका डिएसपी लालध्वज सुवेदीको बिदाइ र वृत्तमा आएका डिएसपी निरञ्जनदत्त भट्टको स्वागतका लागि आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष अमित पाण्डेसँगै डिएसपीद्वय सुवेदी र भट्टले शीलाई खादा ओडाएर सम्मान गरे । कार्यक्रममा मञ्चका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार राजु खरेल, विहारसम्बद्ध समाजसेवी शान्त शर्मा, समाजसेवी पत्रकार शिव अधिकारी अविरल लगायतको उपस्थिति थियो । बोधिसत्व विहार प्राणी सेवामा समर्पित बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । ताइवानी नागरिक शी यसका मूल सञ्चालक हुन् । लकडाउनअघि नेपाल आएका शी लकडाउनका कारण यतै अड्किएका छन् ।
उनको नेपाल बसाइँले विहार मार्फत हुने मानवसेवाका कार्यक्रमलाई निकै व्यापक बनाएको छ । कोरोना महामारीबीच जारी लकडाउनयता विहारले स्वयम्भू आसपासका क्षेत्रमा मात्रै २५ हजारभन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना खुवाइसकेको छ । राजधानीभर एक लाखभन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना खुवाएको विहारले शिशुलाई ल्याक्टोजिन, बालक र वृद्धलाई सर्वोत्तम पिठोको लिटो र सुत्केरीलाई जडीबुटीजन्य औषधीसमेत बाँडिरहेको छ ।
मानव मात्र नभई सिङ्गो प्राणीजगतको सेवाको लक्ष्य राख्ने विहारले धार्मिक क्षेत्रमा आवागमन बन्द भएसँगै भोको पर्न थालेका स्वयम्भू क्षेत्रका बाँदरहरूलाई हरेक दिन चना खुवाइरहेको छ । विहारले देशभरका विभिन्न अस्पताल, सुरक्षा निकाय, राजधानी छिर्ने सबै नाकाका चेकपोस्ट र केन्द्रीय कारागारलाई पिपिईसहित स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाइका सामग्री सहयोग गरेको छ । यसैबीच, विहारले जोखिम क्षेत्रमा सूचना संकलनमा खटिने २०० भन्दा बढी पत्रकारलाई पिपिई, प्रेस ज्याकेट, मास्क, ग्लब्स, स्यानिटाइजर उपलब्ध गराएको छ ।
काठमाडौं, १३ जेठ । होटललाई आवश्यकता अनुसार क्‍वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग दिन व्यवसायीहरु सहमत भएका छन् । क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्च सहितको विस्तृत विवरण होटल संघ नेपालले पर्यटन विभागका महानिर्देशकलाई बुझाएको छ।
होटललाई क्‍वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने पर्यटकीयस्तरका होटल र पाँचतारे गरी २ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। पर्यटकीयस्तरको होटलमा क्‍वारेन्टाइनमा बस्ने एक्लो संक्रमितले दिनको ३ हजार रुपैयाँ र दुईजना बस्ने संक्रमितले दिनको ५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने बताइएको छ। यस्तै पाँचतारे होटलको हकमा एक्लो बस्दा दिनको १० हजार रुपैयाँ र दुईजना बस्दा दिनको १६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने संघले प्रस्ताव गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिए।
होटल सरसफाइ र सुरक्षाका दृष्टिकोणले स्तरीय हुने र विश्व स्वास्थ्य संगठनको दायरा अनुरूप नै पौष्टिक खानाको व्यवस्था पनि हुने हुँदा संघले खर्चलाई छुट्टाएको शाहले बताए। अथवा कुनै होटलले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिना शुल्कमा पनि कोरोना संक्रमितलाई राख्न सक्ने छन् या आफ्ना होटललाई क्‍वारेन्टाइन नबनाउन पनि सक्ने बताइएको छ।
संघले पेश गरेको विवरणमा भनिएको छ–क्वारेन्टाइन अवधिभरि उपलब्ध गराइने तोकिएको चार छाक पौष्टिक स्वास्थवद्र्घक आहार, आवश्यक पर्ने सबैखाले आधारभूत सेवासुविधा, सञ्चार, पानी, बिजुलीलगायत कामदार कर्मचारीको पारि श्रमिक, सेवा शुल्क, कर दस्तुर सबै खर्च नेपाल सरकारको वर्गीकरण अनुसार पर्यटकस्तरीयदेखि पाँचतारे होटलमा लाग्ने अनुमानित खर्चको शीर्षकअनुसार न्यूनतम आधारको रूपमा सबै सदस्य होटलको जानकारी तथा प्रत्येक प्रतिष्ठानस्तरको सञ्चालन निर्णयका लागि सिफारिस गरिएको छ।
काठमाडौं, ३ जेठ । राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ (नाटोज) ले कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असर र सो क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सरकारले देखाएको उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाटोजले विद्यमान संकटग्रस्त परिस्थितिप्रति सरकारले कत्ति पनि गम्भीरता नदेखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारीले उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिदिएको छ, नाटोज अध्यक्ष शिव अधिकारी अविरलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ूलगभग शून्यमा झरेको पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले गम्भीरताका साथ ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो क्षेत्रले इतिहासमै नदेखेको दुर्दशा भोग्नुपर्ने छ, र यसबाट सिंगो राज्यले अपुरणीय क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ ।
ठूलो तयारी र लगानीका साथ भिजिट नेपाल २०२० अभियानमा जुटेका बेला आइपरेको यो संकटले पर्यटन क्षेत्रमा लागेको अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा लामो संघर्ष गरेर स्थापित भएका सयौँ पर्यटन व्यवसायी विस्थापनको संघारमा पुगेको उल्लेख छ । यदि यस्तो भए यो क्षेत्रले पुरानै अवस्थामा फर्किन बिसौँ वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने नाटोजको विश्लेषण छ । लगभग शून्यको अवस्थामा पुगिसकेको पर्यटन क्षेत्रले बामे सर्नकै लागि पनि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने उसको आकलन छ ।
नाटोजका अनुसार, २०२० का लागि यसअघि भएका ७० प्रतिशत बुकिंङ रद्द भइसकेका छन् । विश्वभरको परिस्थिति हेर्दा बाँकी ३० प्रतिशत बुकिंङ पनि सार्थक हुने लक्षण देखिएको छैन । यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा लागेको अर्बौंको लगानीका साथै यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौ मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको छ । देशको अर्थतन्त्रको मजबुतीमा मात्र नभई सामाजिक उत्थान र विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याइरहेका पर्यटन व्यवसायी एकाएक धरासायी हुनु राज्यकै लागि चिन्ताजनक अवस्था हो । तर, यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा राज्यले देखाइरहेको उदासीनताले देशकै आर्थिक मेरुदन्ड तोडिन सक्ने भन्दै नाटोजले त्यसतर्फ सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी ध्यान पुर्याउनुपर्ने विद्यमान परिस्थितिमा यो क्षेत्रलाई लिएर अर्थमन्त्रीबाट भएका हल्काफुल्का टिप्पणीलाई केटाकेटीपनको संज्ञा दिँदै नाटोजले यस्तो संवेदनशील विषयमाथिको सरकारको उपेक्षाले राज्यलाई नै राम्रो नगर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिलेसम्म सरकारी तबरबाट यो क्षेत्रको समस्या सम्बोधनको प्रयाससम्म नहुनुले भोलिको स्थिति निकै भयावह हुने संकेत देखिएको नाटोजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भर्खरै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्दै नाटोजले बजेटमार्फत यो समस्याको ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आगामी बजेटमा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी, श्रमिक र पर्यटन क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारको उत्थान र पेसाव्यवसायगत सुरक्षणका लागि विशेष योजना समेटिनुपर्ने भन्दै नाटोजले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ूमुर्छाएको पर्यटन क्षेत्रलाई जगाएर तङ्ग्र्याउन सरकारले ठोस नीतिसहित तत्काल कदम चालोस्,विज्ञप्तिको अन्त्यमा नाटोजले भनेको छ,नत्र, अझै पनि सरकारका आँखा नखुल्ने हो भने पर्यटनसँगै सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने निश्चित छ ।
कोरोनाले टुरगाईडहरु समस्यामा परेको भन्दै सरकारसँग टुर्गानको ९ बुँदे माग
काठमाडौं, ३० बैशाख । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिट–१९) को कारणले धरासायी बनेको नेपालको पर्यटन व्यवसायसँगै यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौ टूरगाइड बेरोजगार बन्नु परेको भन्दै टुरिष्ट गाईड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुगार्न) ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ९ बुँदे माग पेश गरेको छ ।
टुर्गानले बुझाईएको ९ बुँदे मागमा सरकारले यसअघि घोषणा गरे अनुरुप विभिन्न क्षेत्र एवं आयोजनाहरुमा (टूरगाइडको शिक्षा,क्षमता र दक्षता अनुसार) अन्तरिम रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्न, टुर्गानको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त टूरगाईडलाई बिना धितो न्यूनतम ब्याजदर (बढीमा ५ प्रतिशत) मा ५ वर्षको लागि न्यूनतम रु १० लाख रुपैयाँ कर्जा र १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) ले प्रदान गर्ने नयाँ टुरगाईड तालिम आगामी ३ वर्षसम्म बन्द गर्नुपर्ने, टुरगाईडहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अन्यौलता रहेकोले त्यसलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र आगामी कम्तीमा २ वर्ष देशभरि छरिएर रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको अध्ययन, अनुसन्धान कार्यमा टुर्गानका प्रतिनिधिहरुलाई पनि अनिवार्य सहभागि गराउनुपर्ने र कूटनीतिज्ञहरुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भ्रमण टोलीले विश्व सम्पदा सूचीकृत सम्पदाहरूको अवलोकनको क्रममा उचित पारिश्रमिक व्यवस्था सहित संस्थाको सिफारिसमा टुर गाईडलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने लगायत छन् ।
कोरोना संकटका कारण पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा टूरगाईड र आश्रित परिवारको जीवन कठिन मोडमा पुगेकाले त्यसलाई सहज बनाउन सरकारले आफुहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने टुर्गानका अध्यक्ष केदार तामाङ्गले बताए ।
अधिकारीलाई गाउँले पर्यटन –नेपालका अध्यक्ष पौडेलद्वारा पीपीई प्रदान
काठमाडौं, २३ बैशाख । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न अभियान चलाईरहेका समाजसेवी शिव अधिकारी अबिरललाई गाउँले पर्यटन–नेपाल (भिलेज टुरिजम – नेपाल) का अध्यक्ष तेजेन्द्र शर्मा पौडेलले पनि मदत गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका पौडेललाई उपलब्ध सामग्रीमध्यबाट अधिकारीलाई २० थान पीपीई, एक सय पिस माक्स र १ सय पिस ग्लोब्स प्रदान गरेका हुन । अधिकारीले उक्त सामग्रीहरु नुवाकोटाको तारकेश्वर र मेघाङ क्षेत्रमा प्रदान गरिसकेका छन् ।
साथै उनले आफ्नो अभियानमा साथ दिने पौडेलप्रति आभार प्रकट गर्दै नुवाकोटका अन्य क्षेत्रहरुमा पनि आगामी दिनमा यस्ता सहयोगहरु जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
गाउँले पर्यटन–नेपालका प्रमुख संरक्षक पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापा हुन ।
टूर्गानद्धारा कोरोना भाइरसबाट सर्तकता रहन आग्रह
पर्यटन व्यावसायीको समस्या लिएर पर्यटनमन्त्रीको जम्बो टोली पुगे ईश्वर पोखरेल भेट्न
सार्क राष्ट्र मिलेर कोरोना विरुद्ध लड्न मोदीको प्रस्ताव
काठमाडौं, ३० फागुन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्ककको नेतृत्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध एक भएर लड्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुक्रबार ट्वीटरमार्फत उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को नेतृत्वमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न बलियो रणनीति बनाएर अघि बढ्न आह्वान गरेका हुन् ।
उनले आफ्ना नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउने विषयमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गर्न सकिने पनि बताएका छन् । मोदीले सार्क राष्ट्र सँगै कोरोना भाइरसविरुद्ध लडेर विश्वलाई नै उदाहरण देखाउन सक्ने पनि बताएका छन्
नेपाल आउने पर्यकटलाई अप्रिल ३० सम्म भिसा बन्द
काठमाडौं, ३० फागुन । कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास बढेसँगै नेपाल र भारतबीच आउजाउका लागि केही निश्चित सीमा नाका मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ । बिहीबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले व्यवस्थित भन्सारसहितका नाकाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवागमन गराउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा आउँदो शनिबार राति १२ बजेदेखि अप्रिल ३० सम्मका लागि बन्द गरेको छ।
यसका साथै नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जानेलाई श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ। समितिले अर्को सूचना नभएसम्म श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि अप्रिल ३० सम्म ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ नदिने निर्णय भएको छ।
नयां पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै फिकुरी
कोरोना प्रकरण : पर्यटनमा संकट आएको भन्दै व्यावसायीद्धारा ५० प्रतिशत छुटको माग
सुर्यगढी फिकुरी ट्रेकिङ ट्रेलको अध्ययन अवलोकन पश्चात नुवाकोटबासी उत्साहित
एनएमएलाई परिषद् बनाउने कुरा हल्ला मात्र हो : पर्यटन सचिव केदार अधिकारी
भारी हिमपातका कारणले जोखिममा परेका दिपक महत लगायत समाजका सबै सकुशल
रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजद्धारा भोलिदेखि फिकुरी ट्रेकिङ ट्रेलको ५ दिने अवलोकन भ्रमण सुरु
कमल सापकोटाको संयोजकत्वमा टूरिजम म्यान अफ दी इयर २०२० छनौट कमिटि गठन
अन्तर्राष्ट्रिय टूरिष्ट गाईड दिवस भव्यताका साथ मनाउने टूर्गानको तयारी
नाट्टा गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा सञ्जयकान्त सिग्देल विजयी
पर्यटन क्षेत्र सुधारको पहलसहित सोट्टो नेपालको १२ औँ साधारणसभा सम्पन्न
नुवाकोट गोस्र्याङको ल्होछार कार्यक्रमले इतिहाँस रच्दै
हाँडीगाँउ सामुदायिक घरबास कार्यक्रममा यसरी भयो बिदेशीको घुँईचो
यसरी सुरु गरिन बालबिवाह विरुद्धको अभियान कल्पना महर्जनले
पर्यटनमा बिकृती र सेटिङ्गको भयाबह स्थीति
भ्रमण बर्षको पहिलो महिनामा लुम्बिनीमा पर्यटक घटे
नाट्टा गण्डकी प्रदेश अध्यक्षका लागि झबिलाल अधिकारीद्धारा उमेद्धवारी घोषणा
बरिष्ठ पर्यटन व्यावसायी तेजेन्द्र शर्मा पौडेल भ्रमण बर्ष २०२० मूल आयोजक समिति सदस्यमा नियुक्त
माघ १०, काठमाडौं । पहिला देश अनि बिदेश भन्ने मूल नाराका साथ गन्तव्य नेपाल ईभेन्ट म्यानेजमेन्टले आयोजना गर्न लागेको दोस्रो आन्तरिक पर्यटन मेला(डोमेस्टीक टूरीजम मार्ट २०२० (डीटीएम) को तयारी भव्य रुपमा अगाडी बढेको छ ।
पर्यटन बोर्ड सिईयो छनौटमा चरम राजनीतिक चलखेल
नेपाल भ्रमण बर्ष सफल बनाउन र बिश्व शान्तिको कामना गर्दै एनएमएले शान्ति पूजा गर्ने
नाट्टा निर्वाचनमा कसले कति पाए ? कुन समुहका को को बिजयी भए ?
निजगढ विमानस्थलको लागि जुरिच एयरपोर्टसँग लगानी बोर्डले माग्यो प्रस्ताव
यस्ता छन, अच्यूत गुरागाँई समूहका उमेद्धवारहरु (बिस्तृतमा)
नाट्टा निर्वाचन सरगर्मी : पन्त समुहको उम्मेदवार परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न
नाट्टा निर्वाचनका लागि धाख्वा समुहको मनोनयन दर्ता
सिड्नीमा नेपाल भ्रमण वर्षको शुभारम्भ
फेब्रुअरी १ देखी १० तारिकसम्म ‘आईस क्लाम्बीङ फेस्टीभल’ आयोजना हुँदै
भ्रमण बर्षको उद्घाटनका लागि पर्यटनमन्त्री भट्टराई अष्ट्रेलिया प्रस्थान
पर्यटन बोर्डको प्रमुखका लागि ९ जनाको प्रतिस्पर्धा, जोशी समेत दौडमा
संघर्षशिल युवा पर्यटन व्यावसायी दिपेन्द्र शर्मा घिमिरे
नाट्टा निर्वाचनका लागि अच्यूत गुरागाँईद्धारा व्यावसायिक टीम घोषणा, को को छन उमेद्धवार ?
नाट्टा निर्वाचनका लागि धाख्वा समुहको उमेद्धवार को को ? यी हुन उमेद्धवार
टूर्गानको भब्य बनभोज कार्यक्रम सुकुटेमा जारी, आन्तरीक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उदेश्य
आज ठमेलमा न्यू ईयर इभ बिशेष भव्य कार्यक्रमको सुरु
ट्रेकिङ टेन्ट, ज्याकेटको खोजीमा हुनुहुन्छ, प्यारामाउन्टलाई सम्झनुहोस
आज ठमेलमा भ्रमण बर्षको लोगो अंकित मण्डलामा दिप प्रज्वलन गरिने
पर्यटन सम्बद्ध संस्था यति समूहको बचाउमा उत्रिए
नाट्टा निर्वाचनमा पर्यटन परिषद्को सक्रियता बढ्यो, ५ सदस्यीय उमेद्धवार छनौट समिति गठन
पर्यटन परिषद्मा चेवन देबकोटाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति पुर्नगठन
राजधानी ६ बजे नै सुत्छ, भ्रमण बर्षमा नाईट लाईफ व्यूताउँनुपर्छ : योगेश भट्टराई
विदेशी विमान कम्पनीलाई भ्रमण वर्षको जिम्मा, राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई उपेक्षा
काठमाडौंले धान्दैन, निजगढमा विमानस्थल बनाउनैपर्छ : योगेश भट्टराई, पर्यटनमन्त्री
रिभरफन बिच रिर्सोटले नयाँबर्षको उपलक्ष्यमा धमाकेदार ‘न्यू ईयर ईभ विच पार्टी’ आयोजना गर्दै
फोब्र्समा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमघामको चर्चा, संसारकै उत्कृष्ट गन्तब्यमा सूचीकृत
पत्रकार जनार्दन अर्यालको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय टोपी दिवस मुल कमिटी गठन
पर्यटकीय क्षेत्रमा पहिलोपटक बिधुतिय सवारी साधन सञ्चालनमा
भ्रमण बर्ष २०२० को उद्घाटनलाई भव्य बनाउने सरकारको तयारी
नाट्टा अध्यक्षका उमेद्धवार अच्यूत गुरागाँई को हुन ?
आन्तरीक पर्यटन मेलाको तयारी तिब्र, स्टल बुकिङ जारी
काठमाडौंको ठमेल क्षेत्र असुरक्षित बन्दै
डीटीएम अन्तर्राष्ट्रिय बिभाग प्रमुखमा दामोदर ढकाल मनोनीत
नाट्टा नेतृत्वमा दिपेन्द्रकुमार घिमिरे(डिके शर्मा)को उमेद्धवारी घोषणा, काम बहादुर बन्ने भनाई
नाट्टाको अध्यक्षमा अच्यूत गुरागाँईको उमेद्धवारी घोषणा, पर्यटन क्षेत्र सुधारको लक्ष्य
नाट्टाको अध्यक्षमा पूर्वमहासचिव धाख्वाको उमेद्धवारी घोषणा, काम गरेरै देखाउने भनाई
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी होटलहरु खुल्ने क्रम बढ्दो
कर्णाली सरकारले भ्रमण वर्षका लागि आफ्नै लोगो र नारा बनाउने
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सिन्धुलीमा भ्युटावर
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८४ प्रतिशत काम सकियो
तारकेश्वर ढाँडाखर्कको खानेपानीको अन्तिम चरणसँगै बिदेशीको भव्य बिदाई
मंसिर १० गतेबाट १८ औ ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज भोटेकोशीमा सुरु
‘भिजिट नेपाल २०२०’ सफल बनाउन सरकारको ८ बुँदे निर्देशन
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तब्य बन्दै टौदह
आन्तरिक पर्यटक बढे, झरनामा बढी चहलपहल
देशभरका सार्वजनिक यातायातका साधनमा भ्रमण वर्षको लोगो राखिने
मनमोहक हिमाली क्षेत्र
समाजसेवाका चम्किला तारा जगत लामा
लगेज घिर्सादै पर्यटक ठमेल नै किन आउने ? ‘टि जोनको व्यवस्था नै गलत छ’ :गिता गुरुङ
पर्यटन बोर्डको नयाँ सिईयो नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्यो, पौडेलको नेतृत्वमा छनौट समिति
पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै बैतडीमा राष्ट्र निर्माण महामहोत्सव
ठुला बन्यजन्तु बचाउन र दाँत माझ्ने अभियानमा भुमिका खेल्दै मकालु एड्भेन्चर
विदेशी पाहुनालाई भ्रमण वर्षभर होटलमा ३० प्रतिशत छुट
पर्यटकले भ्रमण बर्षमा नै किन, भनेर सोध्दा निरास हुनुपर्ने स्थीति छ :तेजेन्द्र शर्मा पौडेल
नयाँ हवाईनीति ल्याउने तयारीमा सरकार
‘नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२०’ सफल बनाउन एनआरएनएसँग १७ बुँदे समझदारी
चिनियाँ अभिनेत्री सी ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को लागि सदभावना दूत नियुक्त
पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न ताप्लेजुङमा पाथीभरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सव हुने
रसुवाको पदमार्गमा निस्केका दुई पर्यटक १० दिनदेखि बेपत्ता
नयाँ व्यवस्थापन सहित बल्थली ईको हिल रिर्सोट सञ्चालनमा
विश्व पर्यटन दिवसको हुईयाः सेता व्यानर, निरीह अनुहार !
भ्रमण बर्ष २०२० को तयारीबारे सरोकारवालाहरुको धारणा ?
मनास्लु हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा एक विदेशी पर्यटकको मृत्यु
एयरलाइन्स घाटा छ, मन शान्त भएन :मन्त्री भट्टराई
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी २० वटा पर्यटकीय बसहरु थपिए
पर्यटन दिवसको अवसरमा तीन नयाँ गन्तब्य घोषणा
आज ४० औं विश्व पर्यटन दिवसः विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
गीता गुरुङको नेतृत्वमा पर्यटन दिवसको अवशरमा प्रभातफेरीको आयोजना
फेक रेस्क्यु गर्नेका दिन सकिए, पर्वतारोहीको उद्दार अगाडि विभागमा खबर नगरे कारबाही
भोली ठमेलको क्लब फरेनहाईटमा डेनिकोयोको डिजे रात्रीकालीन प्रश्तुती हुँदै
आधा बर्ष हराउने खर मजुर सधैका लागि लोप हुने खतरामा
पर्यटन विभागका महानिर्देशकद्धारा यती बाइक रेस २०१९ का विजेतालाई सम्मान
कमल सापकोटा ‘साउथ एसिएन युथ लिडरसिप अवार्ड’बाट सम्मानित
उपकरणमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन बिमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय अवतरण प्रभावित
सद्भावना दूत मानिने पथ प्रदर्शकका लागि आवश्यक तालिमको अभाव
पर्यटकलाई उद्धार गर्न पुगेका ७ हेलिकोप्टर काभ्रे र सिन्धुलीमा आकस्मीक अवतरण
असई खड्कालाई धावनमार्गमा कुल्चने लुक्ला हवाई दुर्घटनाको मुख्य कारण मानवीय त्रुटि
भोली हुने नारा निर्वाचनमा नेपाल र ठकुरीबिच प्रतिस्पर्धा हुंदै
टानमा प्रजातान्त्रिक समूहको पल्लाभारी, ८३ मतको अन्तरले सुवेदी विजयी
एनटीभीएको अध्यक्षमा रामहरि शर्मा निर्विरोध, औपचारिक घोषणा भदौ २२ गते हुने
टान निर्वाचनलाई लिएर अञ्जन थापा समुहको उमेद्धवार परिचयात्मक कार्यक्रम आज
को हुन खुमबहादुर समुहका प्रथम उपाध्यक्षका उमेद्धवार चोलेन्द्रबहादुर कार्की ?
को हुन अञ्जन थापा(कुमार)समुहका प्रथम उपाध्यक्ष पदका उमेद्धवार प्रकाशचन्द्र देबकोटा ?
को हुन अञ्जन थापा(कुमार) समुहका सह–कोषाध्यक्ष पदका उमेद्धवार प्रदिप पण्डित ?
को हुन खुमबहादुर समुहका सचिब पदका उमेद्धवार प्रदिप घिमिरे ?
टान निर्वाचनको लागि अञ्जन थापा(कुमार) समुहद्धारा मनोनयन दर्तासँगै प्रतिबद्धता पत्र प्रश्तुत
टान निर्वाचनको लागि खुमबहादुर सुबेदी समुहद्धारा मनोनयन दर्तासँगै प्रतिबद्धता पत्र प्रश्तुत
को हुन् चोलेन्द्र बहादुर कार्की ? प्रथम उपाध्यक्ष नै किन दाबी गरे ?
निःशर्त प्रजातान्त्रिक प्यानललाई सहयोग गर्ने गोपालबाबु श्रेष्ठको भनाइ
निःशर्त प्रजातान्त्रिक प्यानलाई सहयोग गर्ने गोपालबाबु श्रेष्ठको भनाइ
अन्जन थापा (कुमार) द्वारा आफ्नो उम्मेद्वारी व्यवसायिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको भनाइ
को हुन कुमार थापा समुहका सचिब पदका उमेद्धवार दामोदर ढकाल ?
को हुन खुमबहादुर समुहका महासचिब पदका उमेद्धवार कर्मा शेर्पा ?
खुमबहादुर समुहका बरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेद्धवार नबिन त्रिताल को हुन ?
निर्मला धमलाको नेतृत्वमा महिला पर्यटन व्यावसायी संघ गठन
बायस गरेको भन्दै समाजवादी निकट पर्यटन व्यवसायीले कामिरिन्जीको नेतृत्वमा टिम घोषणा ग¥यो
टान अध्यक्षका उमेद्धवार थापाको कार्यसमिती सार्बजनिक
‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ सफल बनाउन व्यस्त पाँचपोखरी
प्रजातान्त्रिक समूहको प्रचार–प्रसार संयोजकमा थपलिया
टानमा प्रजातान्त्रिक समूहले बनायो सुबेदीको नेतृत्वमा व्यवसायीक प्यानल
निटद्धारा टान नेतृत्व घोषणा, अध्यक्षमा खुमबहादुर सुवेदी सर्बसम्मत उमेद्धवार
५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय टूर गाईड सम्मेलन सम्पन्न
वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल भरतपुरलाई बनाइनेः पर्यटनमन्त्री
मोहन लम्सालद्धारा टान नेतृत्वका लागि व्यावसायिक टिम बनाउने घोषणा
अन्ततः नेकपा उमेद्धवारको औपचारिक घोषणा, थापा बने सर्बसम्मत उमेद्धवार
आहा ! मनै लोभ्याउने लाङटाङ गाँउ
भ्रमण वर्ष सफल बनाउन विमानस्थल चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न माग
रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजमा पूनः बलराम न्यौपाने निर्वाचित
होटल लेकस्टार पोखरा पुन सञ्चालनमा
सोट्टो लुम्बिनी गठन, अध्यक्षमा पर्यटन ब्यबसायी सञ्जय बजिमय
रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजको मनोनयन भोली सिडब्लु पार्टी हलमा हुँदै
प्रकाशचन्द्र देबकोटाद्धारा टान प्रथम उपाध्यक्षमा उमेद्धवारी घोषणा
नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यावसायी संगठनद्धारा टान अध्यक्षका लागि मुक्ति पाण्डेको नाम घोषणा
आरबि अधिकारीको नेतृत्वमा टान निर्वाचनलाई लक्षित गरी बार्ता टोली गठन
समाजबादी सम्बद्ध व्यावसायीका तर्फबाट शेर्पा र देबकोटाको नाम औपचारिक घोषणा
पर्यटकको आकर्षण बन्दै गोही प्रजनन केन्द्रः ७३ हजार ले गरे
टानमा साझा उमेद्धवारको खोजीका लागि नेकपा सम्बद्ध पर्यटन व्यावसायीको भेला हुँदै
टान नेतृत्वका लागि बिहिबार ४ बजेसम्म उमेद्धवारी पेश गर्न निटको आह्वान
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि क्यानोनिङ महोत्सव हुने
दिपक महतको नेतृत्वमा पर्यटन कांग्रेसको व्यावस्थापन तथा सहजीकरण समिति गठन
छोटो दूरीको रमाइलो ट्रेकः फिकुरी ट्रेक नुवाकोट
मदन आचार्य समूहले संगठनमा फर्की भन्ने हैसियत राख्न सक्दैनः सिताराम सापकोटा
ऐतिहासिक देवदह ताल ओझेलमा
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने, ‘फेवाताल संरक्षणमा सहयोग गर्छु’
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कार्यक्रमः देवदहमा श्रावण पूर्णिमा उत्सव
नेपाल पर्यटक यातायात व्यावसायी संघ र शिखर ईन्सुरेन्सबिच २४ बुँदे सहमति
भुलभुले दूधकुण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो
अन्नपूर्ण पदमार्गमा हामखोला झरना पर्व (वाटरफल फेस्टिबल)
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै पिण्डेश्वर धाम
हिमालयन ग्लासियरको ब्राण्ड एम्बेसडरमा कामिरिता शेर्पा मनोनित
नारा निर्वाचन भदौ २४ गते घोषणासँगै ४ अध्यक्षका प्रत्यासी चर्चामा
भ्रमण वर्ष २०२० को नाममा ५ करोड रुपैयाँको खर्च प्रभावहीन
पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको देउराली गुफा संरक्षणको पर्खाइमा
नाटोजद्वारा पर्यटन मन्त्री भट्टराईलाई ६ बुँदे सूझाव
चितवनमा भ्रमण वर्ष २०२० तयारी तीव्र
नाट्टाद्वारा पर्यटन मन्त्रीलाई १२ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण
‘भ्रमण वर्ष’ लक्षित तेमाल हाइकिङ सुरु
टान बरिष्ठ उपाध्यक्षमा न्यौपानेको उमेद्धवारी : टानलाई सुधार्न झाडापखलाको औसधी लिएर जान्छु
सिम्बीर घलेले टान सदस्यमा उमेद्धवारी दिने
टान निर्वाचनको लागि समाजबादी पार्टी निकट पर्यटन व्यावसायीको बार्ता तथा संबाद कमिटी गठन
माछापुच्छ्रे पदयात्रा मार्गमा धमाधम पूर्वाधार
पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरहरुलाई निःशुल्क चिनियाँ भाषाको तालिम
नेपाल पर्यटक यातायात व्यावसायी संघको नयाँ नेतृत्व भदौ २० मा चयन हुँदै
तेस्रो पाँचपोखरी "ट्रेल हाफ म्याराथन" हुँदै
दाङको कठबेरुवा झरना अझै ओझेलमा
काम नगरी असफल हुने छुट छैन :योगेश भट्टराई, मन्त्री
योगेश भटराईले पर्यटन मन्त्रीको रुपमा सपथ लिदैं
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय बोम्बो (झाँक्री) सम्मेलन हुँदै
पोखरामा तीन लाख पर्यटक
विशुद्ध तरकारीको लागि कपनको अर्गानिक फार्म हाउस
ऋतु ग्याम्दानद्धारा टान कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
टानको नेतृत्वमा जाने कुनै सोच छैन : बोधराज भण्डारी
दुर्गानाथ न्यौपाने(बलराम)द्धारा टान बरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेद्धवारी घोषणा
टानद्धारा पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीको संयोजकत्वमा रविन्द्र अधिकारी पुरस्कार घोषणा
मुस्ताङमा बृहत यार्तुङ महोत्सव हुने
पदयात्रामा जाने पर्यटक घट्दै
भ्रमण बर्ष सन्दर्भ :सरकारले निरुत्साहित होईन, उत्प्रेरित गरोस ।
हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौ–ढाका सिधा उडान
डोल्पामा “डोल्पा महोत्सव २०७६” हुने
पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटक सर्वेक्षणको तयारीमा सरकार
पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि रसुवामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान
टेक खकुरेलद्धारा टान कोषाध्यक्षमा उमेद्धवारी घोषणा
काठमाडौंको हाडीगाउँमा होमस्टे सञ्चालन हुने
असार २६, काठमाडौं । पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको हाडीगाउँमा काठमाडौं महानगरपालिले पहिलो होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारीमा लागेको छ ।
दयानिधी उर्फ दिपेन्द्र ढकालद्धारा टान कोषाध्यक्षमा उमेद्धवारी घोषणा
दामोदर ढकालद्धारा आगामी टान निर्वाचनमा महासचिबको रुपमा प्रश्तुत हुने घोषणा
सगरमाथा आरोही ओमनी युवती नादिरा अल हार्थी सम्मानित
असार २५, काठमाडौँ । ओमनस्थित नेपाली दूतावासले सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो ओमनी महिला नादिरा अल हार्थीलाई कदरपत्र दिई सम्मान गरेको छ ।
असार २४, काठमाडौं । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपनि मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा भने अहिलेसम्म पर्यटकीय सवारी साधनका लागि छुट्टै बसपार्क बन्न सकेको छैन ।
हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी हल्ला मात्रै
असार २४, काठमाडौं । हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा केही समयमा लागि रोक्ने भन्ने विषय हल्ला मात्रै रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
पाटा नेपालको एक हप्ते ‘स्मार्ट प्राक्टिसेस फर म्यानेजिङग होटल’ तालिम सम्पन्न
असार २४, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड, रेसिडेन्सी होटल एकेडेमी र बुद्धमाया गार्डेनको सहकार्यमा प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरलेले आयोजना गरेको एक हप्ते ‘स्मार्ट प्राक्टिसेस फर म्यानेजिङ्ग होटल’ तालिम सम्पन्न भएको छ ।
ठमेलमा इलेक्ट्रिसिटी आतङ्क
असार २३, काठमाडौं । पर्यटकीय मुख्य क्षेत्र ठमेलका अधिकाशं क्षेत्रमा छिनछिनको लोडसेडिङले व्यवसायीहरु आजित भएका छन् । छिनछिनमा बत्ती आउने जाने क्रमले गर्दा ठमेल क्षेत्रभित्र रहेका होटल, रेष्टुराँहरुमा भोल्टेजको समस्याले होटल तथा रेष्टुराँमा प्रयोग हुने साम्रगीहरुमा दिन प्रति दिन क्षति हुने क्रम बढ्दो छ ।
असार २३, काठमाडौ । स्वीट्जरल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासको आयोजना तथा एनआरएनएन र स्विस–नेपाली समाजको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्वन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल’ वर्ष घोषणा गरेसँगै स्वीट्जरल्याण्डमा पनि यस्तो अभियान सुरु गरेको हो ।
नेपालमै पहिलो पटक नेप्लिजइथ्निक्स फुड फेस्ट हुने
असार २३, काठमाडौं । ग्लोवल नेपलिज सेफ फेडेरेशनको आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक नेप्लिजइथ्निक्स फुड फेस्ट हुने भएको छ । असार २५ देखि २८ गतेसम्म हुने उक्त फेस्टमा नेपालको हिमालीखानाको बारेमा छफलसमेत हुने छ । त्यसको लागि आयोजकले इन्डिया सिकिमको हिमालयनखाना विशेषज्ञ डा. ज्योतिप्रकाश तामाङ आउने कार्यक्रम रहेको छ ।
अस्ट्रिच फार्म सञ्चालनपछि आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल
असार २२, काठमाडौं । बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभरमा अस्ट्रिच फार्म सञ्चालनपछि सुनसान बस्ती चहलपहल बस्तीमा परिणत भएको छ । चहलपहलमात्र नभई यहाँ आउने पर्यटकको संख्या पनि बढेको गाउँलेहरुको भनाइ रहेको छ ।
टान निर्वाचन :ठाकुर प्रसाद सापकोटाद्धारा सचिबमा उमेद्धवारी घोषणा
असार २०, काठमाण्डौ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को निर्वाचन नजिकिदै गर्दा बजारमा चुनाबी चहलपहल सुरु भएको छ । दुई बर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा यही भदौ २० गते सेप्टेम्बर ६ तारिकका दिन निर्वाचन तय भएको हो । टानको नेतृत्वमा बिभिन्न व्यक्तिहरुले उमेद्धवारी घोषणा गरिरहँदा एसियाना ट्रेक एण्ड टुर्सका सञ्चालक ठाकुर प्रसाद सापकोटाले सचिब पदमा उमेद्धवारीको घोषणा गरेका छन ।
संयोजक सुरज वैद्यको प्रस्तावः सगरमाथा आरोहण रोक्ने हो कि ?
असार २०, काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणमा भएको ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज वैद्यले एक सिजन विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण रोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नाट्टाको एकदिने डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङः पर्यटन क्षेत्रको विकासमा डिजिटल मार्केटिङमा जोड
असार २०, काठमाडौं । नेपाल एशोशियसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले नाट्टाका सदस्य पर्यटन व्यवसायी एंव कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल मार्केटिङ र यसको पछिल्लो ट्रेण्ड सम्बन्धि जानकारी दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा एकदने डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङ आयोजना गरेको छ ।
बोधराज भण्डारी सहित सात पर्यटन व्यवसायीले गरे नेकपामा अलग भएको घोषणा
काठमाडौं, २० असार । पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारी सहित ७ जनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट अलग भएका छन् । हिजो एक विज्ञप्ती जारी गदैै भण्डारी सहित गोकर्ण पोख्रेल, शेखर बहादुर थापा, शिवभक्त घिमिरे, ठाकुर धरेल र गुप्त बहादुर भण्डारीले पार्टीबाट अलग भएको जानकारी गराएका हुन ।
टुर्गानको दुईदिने क्षमता अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न
असार १९, काठमाडौं । टुरिष्ट गाइड एसोसियसन अफ नेपाल (टुर्गान) को आयोजना तथा नेपाल टुरिजम बोर्डको सहयोगमा भएको दुई दिने क्षमता अभिमुखीकरण तालिम आज बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बुधबारदेखि भएको सो तालिम विशेष गरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी गरिएको थियो ।
सन्दर्भ भ्रमण बर्ष :यस्तो हिसाबले कसरी पर्यटक आउँछन हो ? :बलराम न्यौपाने
पर्यटकको पर्खाइमा मुगुम गाउँ
असार १८, मुगु । प्रचारप्रसारको कमिले अझै पनि कति पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गाउँहरु ओझेलमै छन् । यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा मुगुम गाँउलाई लिन सकिन्छ । सदरमुकाम गमगढीबाट २ दिनको पैदल यात्रापछि मुगुम गाँउ पुगिन्छ। मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ स्थित यो गाउँ पर्यटकीय सम्भावनाको दृष्टिले आकर्षण मानिन्छ ।
पर्यटन बजारलाई नियमबद्ध र कर छुटका लागि अध्यक्षमा मेरो उमेद्धवारी : लिलाबल्दभ दाहाल
पदयात्रा व्यावसायमा जगटिएको समस्या समाधान बाहेक मेरो अर्को स्वार्थ छैन :मोहन लम्साल
टानको आगामी अध्यक्षका लागि तेज गुरुङको दाबेदारी
काठमाडौं, १७ असार । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान)को निर्वाचन आगामी भदौ २० गते हुदैछ । साधारण सभासँगै निर्वाचन मिति सार्वजनिक गरेपछि आगामी नेतृत्वका लागि आकांक्षीहरु बढ्न थालेका छन् ।
सोही क्रममा गणेश हिमालय पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल अल्टरनेटिभ ट्रेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तेजबहादुर गुरुङले आगामी टानको नेतृत्वका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । टानलाई थप सशक्त बनाउन र व्यवसायीक समस्या हल गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
उनी विगत दुई दशक देखि पदयात्रा पर्यटनमा आवद्ध छन् । भरिया देखि मालिकसम्मको अनुभव बटुका उनले यसअघि सन् १०१५ देखि १७ सम्म टानको प्रथम उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हाली सकेका छन् ।
टान अहिले आर्थिक तथा अन्य सबै किसिमबाट जर्जर अवस्थामा रहेको भन्दै उनले त्यसबाट मुक्तिका लागि पनि नेतृत्वका लागि व्यवसायीक दबबा आएको उनले बताए । पदयात्रा व्यवसायीबीच कुडिएको मनलाई लिएर व्यवसायीक हितमा लगाउन पनि आफु नेतृत्वका लागि दाबेदार हुने उनको भनाई छ ।
ठमेल स्थित काठमाडौं गार्डेन होमका निर्देशक समेत रहेको गुरुङ अहिले पर्यटनमै विद्यावारिधी गर्दै छन् । यसबाहेक सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनी निकै सक्रिय छन् ।
परोपकार युवा क्लब तारकेस्वरद्धारा ५४४ अशोकाको बिरुवा बृक्षारोपण
टान निर्वाचनले बजार तात्यो : नेपाल, सुबेदी र लामिछानेको नाम चर्चामा
किबी फलको बिरुवा चाहियो ? इलाम पानीटार जानुस, पर्यटन र कृषि सँगसगै अवलोकन
कानुनबिपरीत राष्ट्रिय निकुञ्जमा चल्ने भो केबलकार
धरेल भन्छन,‘टानको नेतृत्वमा उपयुक्त बिकल्प हुँ’
टुरिजम लाईफ टाईम अचिभमेन्ट अवार्डबाट गिता गुरुङ सम्मानीत
भ्रमण बर्ष सफल पार्नको लागि पर्यटनमैत्री बातावरण श्रृजना गर्नुपर्नेमा व्यावसायीहरुको जोड
झण्डै ९ करोड खर्चेर एनएमएले बनायो सुबिधा सम्पन्न भवन
सिद्धिथुम्का :सुर्यदयको दुश्यका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य
गन्तव्य समाचार प्रभाव : नसर्ने भो ३ महिना निर्वाचन, भदौ २० मा पक्का
गत बर्ष २५ प्रतिशतले पर्यटक बढे, तर बढेन बसाई अवधी
भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा खुल्यो ‘द गोल्डेन आईज् रेष्टुरेन्ट एण्ड क्याफे’
फिल्म सुटिङको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै पानीटार
नेपाल र फिनल्याण्डबिच सिधा हवाई सेवा सम्झौताको तयारी
जिबनलाई निश्चल आँखाले हेर्नुस, सबै राम्रै पाउनुुहुनेछ :रामकुमार अधिकारी
श्रृजनशिल महिलाहरुको स्वावलम्बनको बाटो :हाँडीगाँउ सामुदायिक घरबास कार्यक्रम
ठमेल परिषद्को बिजयी उमेद्धवारको र्याली आज दिउँसो ३:३० बजे त्रिदेबी मार्गबाट सुरु
नाट्टा र हानको संयुक्त कार्यदलको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं, २६ जेठ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) र होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का पूर्व अध्यक्ष परिषद्को संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । आज बसेको संयुक्त बैठकले पर्यटन क्षेत्रका समसामयिक विषयहरुमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
यस बाहेक सरकारले नितिगत रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिएपनि व्यवहारमा लागु नभएकोले त्यसका लागि पहल गर्ने । र नेपाल पर्यटन वोर्डमा पर्यटन क्षेत्रका वास्तविक पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तथा वोर्डको पुर्नसंरचना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा नाट्टा र हानका पूर्व अध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै, बैठकले आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रका नितिगत विषयवस्तुहरुमा सुधारका लागि नाट्टाका पूर्व अध्यक्ष परिषद्का संयोजक आरआर पाण्डे, नाट्टा अध्यक्ष सिएन पाण्डे र हान पूर्व अध्यक्ष परिषद्का संयोजक योगेन्द्र शाक्य र हान अध्यक्ष सिर्जना राणा सम्मिलित कार्यदल समेत गठन गरिएको छ।
परिषदमा सबैभन्दा बढि मत पाउने बस्नेत भन्छन,–‘ठमेलमा सार्बजनिक शौचालय बनाएरै छाड्छौ’
ठमेल परिषदमा बहुमत सदस्यसहित राणा समुह बिजयी
ठमेलको समग्र विकासका लागि पुनः अवसर दिनुस् : गिता गुरुङ
काठमाडौं, २५ जेठ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को उपाध्यक्षको उम्मेदवार गिता गुरुङले व्यवस्थित ठमेल निर्माणका लागि आफ्नो समूहलाई मतदान गर्न आग्रह गरेकी छिन् । ठमेललाई व्यवस्थित बनाउने काममा आफु निरन्तर लागिरहेको भन्दै उनले यसपटक पुन सहयोगका लागि आग्रह गरेकी हुन ।
उनी आज हुने परिषद्को निर्वाचनका लागि प्रकाशनरसिंह राणा प्यानलबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार छिन् ।
परिषद्को सातघुम्ती उपसमितिको सभापति रहेकी उनले सातघुम्तीको विकासमा महत्वपूर्ण काम गरेको स्थानीय व्यवसायी एवं घरधनीहरु बताउछन् । लामो समय देखि थाति रहेको ढल पाइप फेर्ने देखि सडक मर्मत सम्ममा उनले ठुलो सहयोग पुर्याएको उनीहरुको भनाई छ ।
उनको पहलमा वडा कार्यालयसँगको सहकार्यमा २६ वर्षपछि सातघुम्ती क्षेत्रमा ढलको पाइप परिर्वतन गरिएको छ । त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सहकार्य गरि ४ दिनमा पाइप विचक्ष्याउने काम भएको थियो । सडक विभाग, वडा कार्यालय र स्थानीयसँग सहकार्य गरी सडक पिचको काम गरेको उनले बताइन । घरधनीवाट र वडा कार्यालयबाट रकम संकलन गरि ठमलेकै उत्कृष्ठ निर्माण गरेको उनले बताइन । यी सबै काम सकेर अहिले उपसमितिको कोषमा ७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । ठमेलमा थप विकासको काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताइन ।
यसबाहेक उनले ठमेलको सडक बालबालिका व्यवस्थापनमा पनि काम गर्दै आएकी छिन् । ४५ भन्दा बढी सडक बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिई रोजगारीको वातावरण समेत सृजना गरेकी छिन् ।
विगत ६ वर्ष देखि उनी परिषद्मा आवद्ध छिन् । ६ वर्ष अघि कार्यसमिति सदस्यमा भारी मतले विजयी भएकी यसअघि सचिव र वर्तमान कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा भने निर्विरोध चयन भएकी हुन ।
ठमेल परिषद्को अध्यक्षमा प्रधान प्यानललाई मतदान गर्न वाम व्यवसायी संगठको आह्वान
काठमाडौं, २४ जेठ । तत्कालिन एमाले र माओवादी निकट व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठन र पर्यटन व्यवसायी संगठनले ठमेल पर्यटन विकास परिषद्मा अर्जुनलाल प्रधान नेतृत्वको प्यानललाई मतदान गर्न आह्वान गरेको छ ।
परिषद्मा सर्वसम्मत अध्यक्ष चयनका लागि अधिकतम प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएकाले निर्वाचनमा जानु परेको भन्दै तीनै संगठनले यस्तो आह्वान गरेका हुन । नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनका तर्पmबाट नवराज पाण्डे, राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका तर्फबाट पूर्णबहादुर कुँबर र पर्यटन व्यवसायी संगठनको तर्फबाट राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाको संयुक्त कार्यदल बनाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि अधिकतम प्रयास गरिएको थियो । ठमेललाई अन्तर्राष्ट्यि पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका लागि प्रधान प्यानलको टिम सक्षम भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
परिषद्को निर्वाचन भोली हँुदैछ ।
ठमेल परिषद्को प्रचारप्रसारको अवधी समाप्त, उल्लंघन गरे कारबाही गर्छौ :निर्वाचन अधिकृत
लौ हेर्नुहोस, कस्ता छन प्रधान समुहका उमेद्धवार, (बिस्तृतमा)
कुरा होईन काम गर्नका लागि हाम्रो उमेद्धवारी :रामकुमार थपलिया
२१ औं शताब्दि अनुकुल ठमेल निर्माण गछौ :रामचन्द्र गिरी, सचिवका उमेद्धवार
प्रधान र राणाको उमेद्धवार परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न
आज साँझ ५ बजे ठमेल परिषद्को निर्वाचनको लागि प्रधान समुहको परिचयात्मक कार्यक्रम
ठमेल परिषद्को निर्वाचनका लागि गुरुङ समुहको मनोनयन दर्ता
जेठ २२, काठमाडौं । यही जेठ २५ गते हुन गईरहेको ठमेल पर्यटन विकास परिषद् (टीटीडीसी) निर्वाचनमा नेतृत्वका लागि बर्तमान अध्यक्ष समिर गुरुङ समुहले मनोनयन दर्ता गरेका छन ।
ठमेल परिषद्को निर्वाचनका लागि राणा समुहको मनोनयन
ठमेल परिषद्को नेतृत्वका लागि प्रधान, राणा र गुरुङको मनोनयन दर्ता
ठमेल परिषद्को निर्वाचनको लागि प्रधान समुहको प्यानल सार्वजनिक
ठमेल परिषद्को मैदानमा उत्रिए प्रधान :बाम गठबन्धन र स्वतन्त्र व्यावसायीको समर्थन
दोस्रो अन्नपूर्ण म्याराथन भव्यताका साथ सम्पन्न
इलामको पानीटार देउमाई चियाबगान कृषियोग्य भुमि बन्दै
अरे बा कुरा छाड्नुस, भिटोफमा चुनाब लडेको तैपनि हराईदिए :आशुतोस प्रधान
सोसिएसल सर्भिस लाईफ टाईम अचिभमेन्ट अवार्ड २०१९ बाट जगत गुरुङ सम्मानित
२१ तस्बीरमा गन्तव्य नेपाल १५ औं बार्षिकोत्सव(फोटोफिचर)
टुरिजम म्यान अफ दि ईयर अवार्ड २०१९ मिङ्मा शेर्पालाई
जेठ १४, काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको पर्यटन बिश्वका लागि अनुकरणिय रहेको बताएका छन ।
गन्तव्य नेपालको १५ औ बार्षिकोत्सव आज साँढे १ बजेबाट होटल अन्नपूर्णमा हुँदै
पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य ईलामको पानीटार
सगरमाथा आरोहणमा मृतकको संख्या १० पुग्यो
ट्राफिक जाम मात्रै मृत्युको कारण होईन :पर्यटन विभाग
नेपाल योग पर्यटनको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो :योगाचार्य डा. सुबोध
ठमेलमा सज्जीत चित्रकलामा सजिएको होटल आर्ट्स काठमाण्डौ
ठमेल परिषद्को नेतृत्वको लागि शर्मा, प्रधान र पन्तको दाबी
सिजनको सगरमाथा आरोहण खुला, ८ सदस्यीय शेर्पा समुह समेत चुचुरोमा
पर्यटक यातायात व्यावसायी भँडेल डायनामिक अवार्डबाट सम्मानित
डोमेस्टीक टुरिजम मार्ट सफल बनाएको भन्दै अध्यक्ष अधिकारी र संयोजक सुबेदी सम्मानित
गन्तव्य नेपालले २० हजार भित्तेपात्रो बजारमा पठायो
लाजिम्पाटमा सुबिधा सम्पन्न माई ताई रेष्टुरेन्टको उद्घाटन
राफ्टिङ क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्य, सुपर त्रिशुली र्याफटिङ जेठ ७ मा
कमल सापकोटाको संयोजकत्वमा टुरिजम म्यान अफ दी इयर–२०१९ अवार्ड कमिटी गठन
काठमाडौं । दशौं ‘टुरिजम म्यान अफ दी इयर अवार्ड २०१९’ का लागि सफल पर्यटन व्यवसायी कमल सापकोटाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छनोट कमिटी घोषणा गरिएको छ । गन्तव्य नेपाल गु्रपले प्रदान गर्दै आएको यो पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवार्डको रुपमा लिइन्छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र नाम्चेमा पर्यटन सुरक्षा विषयमा छलफल
हिमाल आरोहण गर्ने बढे, दुई महिनामै ५० करोड रोयल्टी
डीटिएम अभुतपूर्व रुपमा सफल भयो, मेला गर्ब गर्न लायक :गोपालबाबु श्रेष्ठ
आन्तरीक मेलाको अन्तिम दिन, स्वतःस्फुर्त अवलोकनकर्ता उर्लिए, २ लाख सहभागि हुने दाबी
रंगीयो भृकुटीमण्डप, बाबुरामको कथन,“आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गन्तव्यको श्रृजनशिल काम”
बैशाख १३ र १४ गते भृकुटीमण्डप जाऔँ, आन्तरीक पर्यटन मेलामा देश चिनौँ
डिटीएम नेपाल चिनाउने महाअभियान, वैशाख १३ र १४ गते भृकुटीमण्डप सहभागी हुन अपिल
काठमाडौं, ११ बैशाख । डोमेस्टिक टुरिजम मार्ट (डीटीएम)को मिति नजिकिदै जाँदा पर्यटन बजार तात्तिएको छ । नेपाल ईभेन्ट म्यानेजमेन्टले यही बैशाख १३ र १४ गते (अप्रिल २६ र २७)का दिन आयोजना गर्न लागिएको डीटीएम २०१९ को चर्चा परिचर्चाले पर्यटन बजार तात्तिएको हो ।
डिटीएम जनसम्पर्क संयोजकमा शिवपुरी मिडियाका अध्यक्ष थपलिया मनोनित
डिटीएम प्रचारप्रसार उपसमितिको संयोजकमा प्रकाश खालिङ मनोनित
डिटीएम सफल बनाउनको लागि नेपाल टेलिकम र गन्तव्य नेपालबिच सम्झौता
बर्ष २०१९ भित्रै सगरमाथाको उचाई नापिसक्ने
त्रिपाठी डोमेस्टीक टुरीजम मार्टको गुडविल एम्बेसडरमा मनोनित
डिटिएम र नाथमबिच ६ बुँदे सम्झौता, मेला भव्य र सब्य बनाउने उद्घोष
गन्तव्य नेपाल गु्रपअन्तर्गत रहेको गन्तव्य नेपाल ईभेन्ट म्यानेजमेन्टले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसर पारेर पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
आर्थिक संकटमा फसेपछि जेट एयरका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्ध
२९ चैत, काठमाडौं । लगातार आर्थिक संकटमा फसेपछि जेट एयरवेजले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रद्द गरेको छ ।
भारतीय मिडियाहरुका अनुसार यसका साथै जेट एयरवेजले अन्य १० विमानहरुलाई पनि सेवाबाट हटाएको छ । यसरी जेटले हालसम्म ७९ विमानहरुलाई सेवाबाट हटाइसकेको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिरणले बिमानस्थल महाप्रबन्धक क्षेत्रीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण
टान कार्यसमिती भित्रको फुट छताछुल्ल, मंगलबार भएको भेलामा झडपको श्रृजना
चैत्र २७, काठमाण्डौ । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पछिल्लो समय पदयात्रा क्षेत्रमा देखिदै गएको तमाम समस्याको निकास खोज्न र आगामी रणनीति तय गर्न भन्दै मंगलबार दिउँसो २ बजे पर्यटन बोर्डमा बिशेष भेला आयोजना गर्यो ।
रिभरफन बिच रिर्सोटले पायो यति ठुलो सम्मान
डोमेस्टीक टुरीजम मार्टप्रति व्यवसायीहरुको हौसलाले उत्साहित छौ :शिव अधिकारी ’अबिरल’
चैत्र २५, काठमाण्डौ । आन्तरीक पर्यटन मेला(डिटीएम)को तयारी अन्तीम चरणमा पुगेसँगै प्रचारप्रसार तिब्र पारिएको छ ।
एसियन अरब बिजनेस अवार्डबाट बिक्रम पाँडे सम्मानित
ठमेल परिषद्ममा प्रधान र शर्माबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने
चैत २२, काठमाडौं । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को साधारण सभासहितको निर्वाचन यहि जेष्ठ २५ गते हुने घोषणापछि अध्यक्षको प्रत्यासीका रुपमा ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्का बर्तमान महासचिव भवि शर्मा र बर्तमान कार्यसमिती सदस्य अर्जुनलाल प्रधानबिच राजनीतिक रंगका बिच नै कडा प्रतिष्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ ।
टानप्रति अफवाह नफैलाउन आग्रह, आँधीबेरी राहत कोष स्थापना